तत्काल नै राष्ट्रपतिको राजीनामा ? - Onlinenews Global
July 15, 2021 laxmiLeaveaComment on तत्काल नै राष्ट्रपतिको राजीनामा ?
त्रिपाठी थप्छन्, ‘ओलीका हरेक सिफारिस अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गरिदिने अनि शेरबहादुर देउवाको दाबी अध्ययन नगरी खारेज गरिदिने गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अध्यादेशबारे पनि राष्ट्रपतिले अप्ठेरो पार्नुभएको थियो । उहाँले देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पनि अप्ठेरो पार्न सक्नुहुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामै राष्ट्रपतिको गलत बाटो सम्झाइदिएको छ ।
त्रिपाठी भन्छन्, ‘संविधान मिचेरै राष्ट्रपतिले ओलीको पक्षमा काम गर्दै आएकाले र पछिल्लो ट्रयाक रेकर्ड हेरेर अत्यन्त अविश्वास गर्यो । यो भनेको अब राष्ट्रपतिले गरिमामय पदमा बस्न मिल्दैन***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
माधव नेपाललाई एमालेमा ठाउँ छैन: ओली
एक–दुई वटा पात खस्दैमा रुखलाई केही फरक पर्दैन भन्दै केपी ओलीले जब यसो भने